City & Liverpool Ha Iska Iloobaan Koobka – Guardiola Oo Magacaabay Koox Kale Oo Ugu Cadcad Hanashada Horyaalka Xili Ciyaareedkan – Laacibnet.net
City & Liverpool Ha Iska Iloobaan Koobka – Guardiola Oo Magacaabay Koox Kale Oo Ugu Cadcad Hanashada Horyaalka Xili Ciyaareedkan
Tababaraha Manchester City ee Pep Guardiola ayaa ka hadlay guul-darradii ay kooxdiisu shalay kala kulantay Tottenham oo ku garaacday 2-0, taas oo keentay in City ay u dhacdo kaalinta 11aad ee miiska kala-sarraynta horyaalka Premier League, halka Spurs ay hoggaanka la wareegtay.
Manchester City oo ku jirtay kooxaha loo saadaalinayo horyaalka xili ciyaareedkan ayaa kaliya dhalisay 10 gool dhamaan siddeeddii kulan ee horyaalka, halka iyadana laga dhaliyey 11 gool, taas oo ka dhigan in daalac lagu leeyahay.
Rikoodhkan oo ah midkii ugu xumaa tan iyo xili ciyaareedkii 2006-07, waxa Pep Guardiola oo ciyaarta kaddib hadlay uu sheegay in naadiga ka badiyey ee Tottenham ay awood sarraysa muujinayso, isla markaana si dhab ah u yihiin koox u tartamaysa hanashada horyaalka.
Pep Guardiola waxa uu sheegay in kooxda tababare Jose Mourinho ay u qalanto inay horyaalka ku guuleysato maadaama ay qaab ciyaareed sarreeya muujinaysay tan iyo bilowgii xili ciyaareedka.
“Iyaga ayaa ugu sarreeya horyaalka, markaa iyaga ayaa kaga horreeya hanashada horyaalka kooxaha kale oo dhan waqtigan.” Sidaas ayuu yidhi Guardiola, waxaanu intaa ku daray: “Dabcan, waxa hadhsan dhibco badan oo loo ciyaari doono sidii loo heli lahaa, annagu siddeed dhibcood ayaanu dambaynaa, hal ciyaarna way noo hadhsan tahay laakiin waxa jira kooxo badan oo naga horreeya. Waxa aanu bilaabaynaa inaanu ciyaaraha ku guuleysano, haddii kale suurtogal noo noqon mayso taasi (inay ku tartamaan horyaalka), waananu ognahay. Waa inaanu isku dayno inaanu ciyaaraha ku guuleysano.”
Pep Guardiola waxa uu qiimayn ku sameeyey qaab ciyaareedka kooxdiisa, waxaanu yidhi: “Marka laga eego ciyaarta, waxay ila tahay in aanaan wax badan ka hoosaynin laakiin waxaanu ku dhibaatoonaynaa sidii aanu goolal u dhalin lahayn, mana aha wax hal qof gaar u ah laakiin kooxda oo dhan. Taas ayay xaqiiqadu tahay, 10 gool… maaha wax nagu filan.”
Tan iyo markii uu yimid Manchester City sannadkii 2016, Guardiola wuxuu ka caawiyey kooxda inay ku guuleysato laba horyaal oo Premier League ah, iyadoo midka hore ay ku qaadeen 19 dhibcood xili ciyaareedkii 2017-18 iyo kan labaad oo xili ciyaareedkii xigay ay dhibic kaliya kaga guuleysteen Liverpool.
Labada sannadood ee kalena waxa kaga guuleystay Chelsea iyo Liverpool. Xili ciyaareedkii 2016-17 waxa hanatay Chelsea oo toddoba dhibcood iyadoo hoggaanka ku haysa koobka qaadatay halka xili ciyaareedkii ugu dambeeyeyna ay Liverpool 18 dhibcood koobka ku qaaday.
Guardiola saadaasha kuma koobin Tottenham oo kaliya, balse waxa uu xusay inuu noqon doono tartan furan oo sidoo kale ay kooxo lama filaan ahi ku jiraan.